us dollar(us dollar) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
अमेरिकी डलर झनै मजबुत हुने संकेत, नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?
काठमाण्डौ । विश्व अर्थतन्त्र कोभिडका कारण थलिएको बेला महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको डलर झनै मजबुत भएर जाने देखिएको छ। नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडनले ल्याएको पूर्वाधार योजनाले गर्दा डलर मजबुत हुने देखिएको हो। पूर्वाधार योजनाका लागि राष्ट्रपति बाइडनले २.३ ट्रिलियन डलरबराबरको राहात प्याकेज ल्यएका छन्। सिटी फरेन स्ट्राटेजिस्टका...
आज डलरको भाउ स्थिर, युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको बढोत्तरी जारी
काठमाण्डौ । आज सोमबार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङमा बढोत्तरी निरन्तरता पाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुको सोमबाररका लागि कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ आज स्थिर रहेको हो। योसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११८.४३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११९.०३ रुपैयाँ कायम भएको छ। डलरको भाउ हिजो ३० पैसाले घटेको...
डलरको भाउमा ओरालो यात्रा कायमै, युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङ लगातार बढ्दै (अन्यको सूचीसहित)
काठमाण्डौ। आज आइतबार अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ भने युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुको आइतबारका लागि कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ आज ३० पैसाले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११८.४३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११९.०३ रुपैयाँ कायम भएको छ। डलरको भाउ गत शुक्रबार पनि ५६ पैसाले घटेको थियो।...
आज डलरको भाउ घट्यो, युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको बढ्यो (अन्यको सूचीसहित)
काठमाण्डौ । आज शुक्रबार अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भने बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुको शुक्रबारका लागि कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ आज ५६ पैसाले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११८.७३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११९.३३ रुपैयाँ कायम भएको छ। डलरको भाउ हिजो ५४ पैसाले बढेको थियो। यो...
डलरसँगै बढ्यो युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ (अन्यको सूचीसहित)
काठमाण्डौ । आज बिहीबार अमेरिकी डलरसँगै युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ पनि बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुको बिहीबारका लागि कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ आज ५४ पैसाले बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११९.२९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११९.८९ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बुधबार डलरको भाउ ३ पैसाले घटेको थियो। हिजो...
काठमाण्डौ । आज बुधबार अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भने बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुको बुधबारका लागि कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ ३ पैसाले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११८.७६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११९.३६ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मंगलबार डलरको भाउ ४२ पैसाले बढेको थियो। हिजो...
आज डलरसँगै बढ्यो युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ (अन्यको सूचीसहित)
काठमाण्डौ । आज मंगलबार अमेरिकी डलरसँगै युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि मंगलबारका लागि कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ ४२ पैसाले बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११८.७९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११९.३९ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सोमबार डलरको भाउ स्थिर रहेको थियो। हिजो...
आज डलरको भाउ स्थिर, युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको घट्यो (अन्यको सूचीसहित)
काठमाण्डौ । आज आइतबार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि आइतबारका लागि कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ स्थिर रहेको हो। आज प्रतिडलर खरिददर ११८.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११८.८७ रुपैयाँ कायम भएको छ। गत शुक्रबार डलरको भाउ ३६ पैसाले बढेको थियो। यो �...
काठमाण्डौ। आज शुक्रबार अमेरिकी डलरसँगै युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि शुक्रबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ आज ३६ पैसाले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११८.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११८.८७ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार पनि डलरको भाउ २७ पैसाले बढेको थियो।...
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ आज बिहीबार बढेको छ भने युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बिहीबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ आज २७ पैसाले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११७.९१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११८.५१ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बुधबार प्रतिडलर खरिददर ११७.६४ रुपैयाँ र...
आज डलर र युरोको भाउ बढ्यो, पाउन्ड स्टेर्लिङको घट्यो(अन्यको सूचीसहित)
काठमाण्डौ । आज अमेरिकी डलर र युरोको भाउ बढेको छ भने पाउन्ड स्टेर्लिङको घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार का लागि कायम गरेको विदेशी मुद्राहरुको विनिमय दरअनुसार आज डलरको भाउ १४ पैसाले बढेको छ। योसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११७.२४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११७.८४ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो डलरको भाउ ५ पैसाले बढेको थियो। हिजो प्रतिडलर खरिददर...
काठमाण्डौ । आज अमेरिकी डलरसँगै युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि कायम गरेको विदेशी मुद्राहरुको विनिमय दरअनुसार आज डलरको भाउ ५ पैसाले बढेको छ। योसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११७.१० रुपैयाँ र बिक्रीदर ११७.७० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो डलरको भाउ स्थिर रहेको थियो। हिजो प्रतिडलर खरिददर ११७.०५ रुपैयाँ र...
आज विदेशी मुद्राहरुको विनिमय दर कति छ ? (सूचीसहित)
काठमाण्डौ । आज अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोको बढेको छ भने पाउन्ड स्टेर्लिङको घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि कायम गरेको विदेशी मुद्राहरुको विनिमय दरअनुसार आज डलरको स्थिर रहेको हो। योसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११७.०५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११७.६५ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो आइतबार डलरको भाउ ७ पैसाले घटेको थियो। हिजो प्रतिडलर...
आज डलरसँगै घट्यो युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ (अन्यको सूचीसहित)
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरसँगै आज युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि कायम गरेको विदेशी मुद्राहरुको विनिमय दरअनुसार आज डलरको भाउ ७ पैसाले घटेको छ। योसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११७.०५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११७.६५ रुपैयाँ कायम भएको छ। डलरको भाउ गत शुक्रबार १३ पैसाले बढेको थियो। यो बढोत्तरीसँगै शुक्रबार...
आज डलर र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ बढ्यो, युरोको घट्यो (अन्यको सूचीसहित)
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलर र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ आज शुक्रबार बढेको छ भने युरोको घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि लागि कायम गरेको विदेशी मुद्राहरुको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ आज १३ पैसाले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११७.१२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११७.७२ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो डलरको भाउ ९ पैसाले घटेको...